शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड
बुटवल । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका अगुवाले जोड दिएका छन । गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षण संस्था र शिक्...
बुटवल । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका अगुवाले जोड दिएका छन । गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षण संस्था र शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्ने सरकारले पहलकदमी ल्याए मात्र शिक्षामा सुधार हुने उनिहरुको भनाई छ ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश नम्बर पांचले आईतबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताए । पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम...
‘ए’ लेभलले तानेन् विद्यार्थी
तिलोत्तमा ए लेभल कोर्षको पढाईमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन नसकेको पाइएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका ३ स्थित बुटवल पव्लिक स्कुलले सञ्चालनमा ल्याएको ए लेभलको कोर्सको अध्यापन...
तिलोत्तमा ए लेभल कोर्षको पढाईमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन नसकेको पाइएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका ३ स्थित बुटवल पव्लिक स्कुलले सञ्चालनमा ल्याएको ए लेभलको कोर्सको अध्यापन पाँच वर्षअघिदेखि सुरु गरेको थियो । तर नतीजा राम्रो आउन नसकेपछि यसप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको हो । राजधानीमा सञ्चालनमा आएका ए लेभल कलेजहरूसँगको तुलनामा मोफसलमा रहेका ए लेभल कलेजहरूको नतीजा अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताइन्छ ।
लुम्बिनी अञ्चलमा एक मात्र ए लेभल अध्यापन बुटवल पव...
विचलित बनाउने कुरालार्इ कसरी विर्सने ?
हामीमध्ये धेरैलाई हुने कुरा हो, हामी आफ्नो कुनै सुखद वा विशेष तथा लज्जास्पद वा दुःखद पलहरू बिर्सन सक्दैनौँ । यो सामान्य अर्थात् आम मानिसमा हुने आम कुरा हो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता क...
हामीमध्ये धेरैलाई हुने कुरा हो, हामी आफ्नो कुनै सुखद वा विशेष तथा लज्जास्पद वा दुःखद पलहरू बिर्सन सक्दैनौँ । यो सामान्य अर्थात् आम मानिसमा हुने आम कुरा हो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कुराहरूले विचलित बनाउन सक्छन् । यस्ता कुराले विचलित बनाउन थाले भने तिनलाई भुल्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । यस्ता कुराहरूलाई भुल्नका लागि अनेकौँ तरिका छन् तर ती कुनै पनि तरिकालाई काममा ल्याउने हो भने तिनलाई जीवनमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्...
सिकलसेल एनिमियाः किन र कसरी लाग्छ यो रोग ?
सिकलसेल एनिमिया । झट्ट सुन्दा तपाईंलाई यो रोगबारे उति हेक्का नहुन सक्छ । खासमा यो रक्त विकारसँग सम्बन्धित रोग हो । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषमा हुने एक जैविक वंशाणुगत रोग हो । यो रोगले शरीरमा रगत बनाउन...
सिकलसेल एनिमिया । झट्ट सुन्दा तपाईंलाई यो रोगबारे उति हेक्का नहुन सक्छ । खासमा यो रक्त विकारसँग सम्बन्धित रोग हो ।
सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषमा हुने एक जैविक वंशाणुगत रोग हो । यो रोगले शरीरमा रगत बनाउने रातो रक्तकोषिकाको संख्या घटाउँदै लैजान्छ । आज सिकलसेल एनिमिया दिवस भएकाले सोही अवसरमा यस रोगको बारेमा उपयोगी जानकारी उपलब्ध गराइएको छ ।
सिकलसेल दिवस जुन १९ मा मनाउने गरिएको छ, विश्वभर नै । यो रोगबारे जनचेतना जागृत गराउने उदेश्यले नेपालमा पनि सिकलसेल दिवस मनाइदैछ । नेपाल...